အင်အားကြီး အမေရိကန်ကို ကမ္ဘာပတ်ပြီး Mask လုဖို့ COVID – 19 ဖန်တီးလေသလား….. – Na Pann San
mask လုပွဲ လို့ပြောရ မလား မသိ ။ တစ်ကမ္ဘာလုံး mask တွေပြတ်လပ် လိုအပ်နေ ချိန် US က နိုင်ငံ တော်တော် များများဆီ က mask လုနေတာ မြင် ရ တာ စိတ်မ သက်သာဘူး ။ လူသားချင်း စာနာစိတ်တွေ ပျောက်ကုန် သလို ဖြစ်လာ ကြ တယ် ။
စကာင်္ပူ နှင့် USA
စလုံးက ကုမ္ပဏီ 3Mက အာရှ အတွက် လိုတဲ့ ဆေးနဲ့ ဆေးပစ္စည်း တွေ ထုတ်ပေးနေတာပါ။ US က စလုံး မျက်နှာတောင် မထောက်ဘဲ စလုံးက 3M ကုမ္ပဏီ ကို တွန်းအားပေး pressure ပေးပြီး အာရှနိုင်ငံတွေ အတွက် လျာထားတဲ့ N95 respirator 10 သန်းကို USကို ပို့ခိုင်းနေတယ်။ သူတို့ တောင်းတိုင်း ပို့လိုက်ရရင် အာရှက ဆေးရုံတွေက ဘာနဲ့သွားသုံး ရမလဲ။ စလုံးတွေကတော့ US က သူတို့ကို big bully လုပ်နေတယ်၊ အနိုင်ကျင့်နေတယ်လို့ အော်ကုန်ပြီ။
စလုံးက နိုင်ငံသေးတော့ နိုင်ငံရေးအရ US ကို သိပ်ပြီး မပြောနိုင် ဖြစ်နေတယ်။ တော်သေးတယ်။ 3M CEO က အာရှက ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေ အတွက် စိတ်ပူလို့ US white house က တောင်းဆိုထားတဲ့ စလုံးက ပစ္စည်းတွေ မပို့ပေးနိုင်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တယ်။ Trump တို့ လိုရင် တရုတ်က စက်ရုံဆီက မှာပြီး ပို့ပေးမယ်၊ စလုံးစက်ရုံ ကတော့ မပေးနိုင်ဘူးလို့ 3M က အပြတ်ငြင်းထားတယ်။ Trump က သူလိုချင်တာ မရတော့ 3M ကို အကြပ်ကိုင် pressure ပေးနေတုန်းပဲ။
ကနေဒါ နှင့် USA
USA ပြည်တွင်း က 3M ကုမ္ပဏီ ကိုကျ ကနေဒါက ဆရာဝန်တွေ သုံးဖို့ မှာထားတဲ့ mask အော်ဒါတွေ ကို မပို့ရဘူး လို့ တားနေတယ်။ ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ US အတွက် nurse တွေ ကနေဒါကနေ နေ့တိုင်း အလုပ်ဆင်းနေတာရှိတယ်။ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ လိုတာ အပြန်အလှန် ကူရမှာပါပဲ။ ကနေဒါကို mask မပို့ရဘူး ပြောတာ မှားပြီးပြောတာနေမှာပါလို့ ကြည့်ကောင်းအောင် ပြောနေတယ်။ Mask မပို့ပေးရင် ကနေဒါနဲ့ US ကြား နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ ရှိလာနိုင်တယ်လို့ ကနေဒါ ဝန်ကြီးချုပ်က သတိပေးထားပါတယ်။
3M က တော့ mask ကိစ္စတွေနဲ့ ပက်သတ်ပြီး နိုင်ငံတော်တော်များက အစိုးရတွေရယ်နဲ့ US အစိုးရကြား ကြားညှပ်နေတယ်။ သို့သော် ဒီအချိန်မှာ 3M က ဘက်မလိုက်ဘဲ US အစိုးရကို လူသားချင်း စာနာထောက်ထားဖို့ humanity ကို ကြည့်ဖို့ပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောနေတယ်။
အစိုးရက ပြောတိုင်းသာ mask တွေ export လုပ်ဖို့ 3Mက ရပ်လိုက်ရင် US အတွက်က ခုလောလောဆယ် mask တော့ ရသွားမယ်။ တချိန်မှာ တခြားနိုင်ငံက လိုအပ်တာ တခုခုရှိခဲ့ရင် ကိုယ်လုပ်ခဲ့သလို သူတို့ပြန်လုပ်ရင် ကိုယ်နိုင်ငံ အတွက် လိုတာ မရဘဲ နေလိမ့်မယ် ရေရှည် အတွက် သေချာစဉ်းစားပြီး လုပ်ဖို့ အကြံပေးထားတယ်။ ဒါပေမယ့် US မှာ ထုတ်ထားတဲ့ mask တွေကို Canada တို့ Latin America တို့ကို မပို့ရဘူးလို့ Defence Production Act ဥပဒေကိုင်ပြီး Trump က ပြောထားတယ်။
ဂျာမနီ နှင့် USA
USA နဲ့ 3M ရဲ့ mask ပြဿနာက အဲ့မှာ မရပ်သေးဘူး။ ဂျာမနီ နိုင်ငံက ဘာလင်မြို့က သူတို့ နိုင်ငံက ရဲတွေ အတွက် သုံးဖို့ 3M ကနေပဲ mask ၂သိန်း မှာထားပါတယ်။ ငွေလဲချေပြီးသားပါ။ ဂျာမနီကို မပို့ခင်မှာပဲ US အစိုးရက သိမ်းယူသွားတယ်။
ပြင်သစ် နှင့် USA
ပြင်သစ်နိုင်ငံက သူ့နိုင်ငံအတွက် တရုတ်ကနေ mask တွေမှာထားပါတယ်။ တရုတ်ကနေ ပြင်သစ်ကို ပို့ဖို့ mask တွေ လေယာဉ်ပေါ်တင်ဖို့ စောင့်နေချိန် အခိုက်အတန့် ခဏလေးမှာ US က ကြားဖြတ်ဝင်ပြီး ဈေး ၃ဆ ၄ဆ ပိုပေးပြီး ငွေချက်ချင်း ချေပြီး mask တွေ ဝယ်သွားပါတယ်။
နိုင်ငံကြီးအနေနဲ့ ဒီလိုမျိုး သူများ ဝယ်ထားပြီးသားဟာကို ဖြတ်ခုတ်သင့်လား စဉ်းစားကြည့်ပါ။ တရားမမျှတတဲ့ ဈေးပြိုင်ဝယ်မှူ့ကြီး unfair competition ကြောင့် ငါတို့ mask ရဖို့ နောက်ကျသွားပြီလို့ ပြင်သစ်က ပြောတယ်။
ကြည့်ရတာ ကိုဗစ်ပြီးရင် အမေရိကနဲ့ နိုင်ငံတော်တော်များများ ခပ်တန်းတန်း ဖြစ်သွားမလား မသိဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံကော mask ပြဿနာ အတွက် ပြင်ဆင်ပြီးပြီလား။
အခုလို သူဌေးနိုင်ငံတွေကြား mask ပြဿနာကို ရေးပြတာ mask တွေ ရှားလာတယ်ဆိုတာ သိစေချင်လို့ပါ။ ပိုက်ဆံရှိရင်တောင် ဝယ်ရခက်လာပြီ။ နိုင်ငံကြီးတွေတောင် mask လုနေကြတာ မြန်မာပြည်အတွက် စိတ်ပူမိပါတယ်။ စလုံးမှာတောင် surgical mask တွေက ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေ အတွက်ပဲ သုံးရမယ်။ ပြည်သူတွေက ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်သုံးလို ရတဲ့ ရိုးရိုး reusable mask ပဲသုံးရမယ်တဲ့။ တခါသုံးပြီးတိုင်း ပြန်လျှော်ပြီး သုံးလို့ရတဲ့ reusable mask ပဲ သုံးလို့ရမယ်။ အလွယ်ဆုံး home made reusable mask လုပ်နည်း CDC ကလုပ်ပြထားပါတယ်။ ဒီမှာ ကြည့်ကြည့်ပါ။
မြန်မာပြည်ကကော mask တွေ အတွက် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲတော့ မသိပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် အစိုးရက ပြည်တွင်းမှာ mask ထုတ်ဖို့ လုပ်နိုင်ရင် ပိုကောင်းတယ်။ ဒါမှ ရဖို့ သေချာလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ ဈေးပြိုင်ဝယ်ဖို့ဆိုတာ သိပ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ တရုတ်က စိတ်မချရဘူး။ ပို့ခါနီးတောင် ဈေး ၃ဆ ၄ဆ ပိုပေးတဲ့လူကို ရောင်းလိုက်တာနော်။ ကိုယ့်ဝယ်ထားပြီး ကိုယ့်ကို ပို့ရမဲ့ အလှည့်မှာ သူတို့ အဲ့လို မလုပ်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူး။
mask တွေ ရှားပါးပစ္စည်းဖြစ်လာတာမို့ ပြည်သူတွေက သုံးမယ်ဆိုလဲ အလေအလွင့် မဖြစ်အောင် သေချာတပ်စေချင်တယ်။ maskကို မေးစေ့ချိတ်လိုက် တောင်ချိတ် မြောက်ချိတ်နဲ့က သုံးရာမကျဘဲ ဖြုန်းတီးရာ ကျပါတယ်။ ကိုယ်လိုသလောက်ပဲ သုံးဖို့ဝယ်ထားပြီး ကျန်တာ ကျန်းမာရေးဌာနကို ဝယ်ပြီးလှူထားသင့်တယ်။ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေမှာ လုံလုံလောက်လောက် ရှိနေမှ သူတို့အတွက် စိတ်ချရတာမို့ ပြည်သူတွေ အတွက် ဆေးသေချာကုပေးလို့ရမှာဆိုတာ မမေ့စေချင်ပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆို ဒီလို mask လုပွဲတွေမှာ မပါရအောင် အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ ပြည်သူတွေ အတတ်နိုင်ဆုံး အိမ်ထဲမှာ နေတာပါပဲ။ အိမ်ထဲမှာ နေရင် mask သက်သာမယ်၊ virus အကူးခံရဖို့ နည်းတယ်၊ တိုင်းပြည်ကိုလဲ ကူညီရာ ကျပါတယ်။ MOHS က ပြောတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေ နားထောင်ပြီး virus ရန် ကာကွယ်ဖို့ အိမ်ထဲမှာ နေကြပါစို့။
US နဲ့ နိုင်ငံအလိုက် mask ပြဿနာ ဖြစ်ထားတဲ့ link တွေ reference အနေနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. with Singapore
2. with Germany
3. with Canada
4. With France
5. Post Photo by Tom Roberts on Unsplash
mask လုပှဲ လို့ပွောရမလား မသိ ။ တဈကမ်ဘာလုံး mask တှပွေတျလပျ လိုအပျနခြေိနျ US က နိုငျငံတျောတျော မြားမြားဆီ က mask လုနတော မွငျရတာ စိတျမ သကျသာဘူး ။ လူသားခငျြး စာနာစိတျတှေ ပြောကျကုနျ သလို ဖွဈလာကွတယျ ။
စကာင်္ပူ နှငျ့ USA
စလုံးက ကုမ်ပဏီ 3Mက အာရှ အတှကျ လိုတဲ့ ဆေးနဲ့ ဆေးပစ်စညျး တှေ ထုတျပေးနတောပါ။ US က စလုံး မကျြနှာတောငျ မထောကျဘဲ စလုံးက 3M ကုမ်ပဏီ ကို တှနျးအားပေး pressure ပေးပွီး အာရှနိုငျငံတှေ အတှကျ လြာထားတဲ့ N95 respirator 10 သနျးကို USကို ပို့ခိုငျးနတေယျ။ သူတို့ တောငျးတိုငျး ပို့လိုကျရရငျ အာရှက ဆေးရုံတှကေ ဘာနဲ့သှားသုံး ရမလဲ။ စလုံးတှကေတော့ US က သူတို့ကို big bully လုပျနတေယျ၊ အနိုငျကငျြ့နတေယျလို့ အျောကုနျပွီ။
စလုံးက နိုငျငံသေးတော့ နိုငျငံရေးအရ US ကို သိပျပွီး မပွောနိုငျ ဖွဈနတေယျ။ တျောသေးတယျ။ 3M CEO က အာရှက ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးတှေ အတှကျ စိတျပူလို့ US white house က တောငျးဆိုထားတဲ့ စလုံးက ပစ်စညျးတှေ မပို့ပေးနိုငျဘူးလို့ ပွောလိုကျတယျ။ Trump တို့ လိုရငျ တရုတျက စကျရုံဆီက မှာပွီး ပို့ပေးမယျ၊ စလုံးစကျရုံ ကတော့ မပေးနိုငျဘူးလို့ 3M က အပွတျငွငျးထားတယျ။ Trump က သူလိုခငျြတာ မရတော့ 3M ကို အကွပျကိုငျ pressure ပေးနတေုနျးပဲ။
ကနဒေါ နှငျ့ USA
USA ပွညျတှငျး က 3M ကုမ်ပဏီ ကိုကြ ကနဒေါက ဆရာဝနျတှေ သုံးဖို့ မှာထားတဲ့ mask အျောဒါတှေ ကို မပို့ရဘူး လို့ တားနတေယျ။ ကနဒေါဝနျကွီးခြုပျကတော့ US အတှကျ nurse တှေ ကနဒေါကနေ နတေို့ငျး အလုပျဆငျးနတောရှိတယျ။ တဈနိုငျငံနဲ့တဈနိုငျငံ လိုတာ အပွနျအလှနျ ကူရမှာပါပဲ။ ကနဒေါကို mask မပို့ရဘူး ပွောတာ မှားပွီးပွောတာနမှောပါလို့ ကွညျ့ကောငျးအောငျ ပွောနတေယျ။ Mask မပို့ပေးရငျ ကနဒေါနဲ့ US ကွား နောကျဆကျတှဲ ပွဿနာတှေ ရှိလာနိုငျတယျလို့ ကနဒေါ ဝနျကွီးခြုပျက သတိပေးထားပါတယျ။
3M က တော့ mask ကိစ်စတှနေဲ့ ပကျသတျပွီး နိုငျငံတျောတျောမြားက အစိုးရတှရေယျနဲ့ US အစိုးရကွား ကွားညှပျနတေယျ။ သို့သျော ဒီအခြိနျမှာ 3M က ဘကျမလိုကျဘဲ US အစိုးရကို လူသားခငျြး စာနာထောကျထားဖို့ humanity ကို ကွညျ့ဖို့ပဲ ထပျခါထပျခါ ပွောနတေယျ။
အစိုးရက ပွောတိုငျးသာ mask တှေ export လုပျဖို့ 3Mက ရပျလိုကျရငျ US အတှကျက ခုလောလောဆယျ mask တော့ ရသှားမယျ။ တခြိနျမှာ တခွားနိုငျငံက လိုအပျတာ တခုခုရှိခဲ့ရငျ ကိုယျလုပျခဲ့သလို သူတို့ပွနျလုပျရငျ ကိုယျနိုငျငံ အတှကျ လိုတာ မရဘဲ နလေိမျ့မယျ ရရှေညျ အတှကျ သခြောစဉျးစားပွီး လုပျဖို့ အကွံပေးထားတယျ။ ဒါပမေယျ့ US မှာ ထုတျထားတဲ့ mask တှကေို Canada တို့ Latin America တို့ကို မပို့ရဘူးလို့ Defence Production Act ဥပဒကေိုငျပွီး Trump က ပွောထားတယျ။
ဂြာမနီ နှငျ့ USA
USA နဲ့ 3M ရဲ့ mask ပွဿနာက အဲ့မှာ မရပျသေးဘူး။ ဂြာမနီ နိုငျငံက ဘာလငျမွို့က သူတို့ နိုငျငံက ရဲတှေ အတှကျ သုံးဖို့ 3M ကနပေဲ mask ၂သိနျး မှာထားပါတယျ။ ငှလေဲခပြွေီးသားပါ။ ဂြာမနီကို မပို့ခငျမှာပဲ US အစိုးရက သိမျးယူသှားတယျ။
ပွငျသဈ နှငျ့ USA
ပွငျသဈနိုငျငံက သူ့နိုငျငံအတှကျ တရုတျကနေ mask တှမှောထားပါတယျ။ တရုတျကနေ ပွငျသဈကို ပို့ဖို့ mask တှေ လယောဉျပျေါတငျဖို့ စောငျ့နခြေိနျ အခိုကျအတနျ့ ခဏလေးမှာ US က ကွားဖွတျဝငျပွီး ဈေး ၃ဆ ၄ဆ ပိုပေးပွီး ငှခေကျြခငျြး ခပြွေီး mask တှေ ဝယျသှားပါတယျ။
နိုငျငံကွီးအနနေဲ့ ဒီလိုမြိုး သူမြား ဝယျထားပွီးသားဟာကို ဖွတျခုတျသငျ့လား စဉျးစားကွညျ့ပါ။ တရားမမြှတတဲ့ ဈေးပွိုငျဝယျမှူ့ကွီး unfair competition ကွောငျ့ ငါတို့ mask ရဖို့ နောကျကသြှားပွီလို့ ပွငျသဈက ပွောတယျ။
ကွညျ့ရတာ ကိုဗဈပွီးရငျ အမရေိကနဲ့ နိုငျငံတျောတျောမြားမြား ခပျတနျးတနျး ဖွဈသှားမလား မသိဘူး။
မွနျမာနိုငျငံကော mask ပွဿနာ အတှကျ ပွငျဆငျပွီးပွီလား။
အခုလို သူဌေးနိုငျငံတှကွေား mask ပွဿနာကို ရေးပွတာ mask တှေ ရှားလာတယျဆိုတာ သိစခေငျြလို့ပါ။ ပိုကျဆံရှိရငျတောငျ ဝယျရခကျလာပွီ။ နိုငျငံကွီးတှတေောငျ mask လုနကွေတာ မွနျမာပွညျအတှကျ စိတျပူမိပါတယျ။ စလုံးမှာတောငျ surgical mask တှကေ ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးတှေ အတှကျပဲ သုံးရမယျ။ ပွညျသူတှကေ ထပျခါထပျခါ ပွနျသုံးလို ရတဲ့ ရိုးရိုး reusable mask ပဲသုံးရမယျတဲ့။ တခါသုံးပွီးတိုငျး ပွနျလြှျောပွီး သုံးလို့ရတဲ့ reusable mask ပဲ သုံးလို့ရမယျ။ အလှယျဆုံး home made reusable mask လုပျနညျး CDC ကလုပျပွထားပါတယျ။ ဒီမှာ ကွညျ့ကွညျ့ပါ။
မွနျမာပွညျကကော mask တှေ အတှကျ ဘယျလိုပွငျဆငျထားလဲတော့ မသိပါ။ ဖွဈနိုငျရငျ အစိုးရက ပွညျတှငျးမှာ mask ထုတျဖို့ လုပျနိုငျရငျ ပိုကောငျးတယျ။ ဒါမှ ရဖို့ သခြောလိမျ့မယျ။ နိုငျငံကွီးတှနေဲ့ ဈေးပွိုငျဝယျဖို့ဆိုတာ သိပျမဖွဈနိုငျဘူး။ တရုတျက စိတျမခရြဘူး။ ပို့ခါနီးတောငျ ဈေး ၃ဆ ၄ဆ ပိုပေးတဲ့လူကို ရောငျးလိုကျတာနျော။ ကိုယျ့ဝယျထားပွီး ကိုယျ့ကို ပို့ရမဲ့ အလှညျ့မှာ သူတို့ အဲ့လို မလုပျဘူးလို့ မပွောနိုငျဘူး။
mask တှေ ရှားပါးပစ်စညျးဖွဈလာတာမို့ ပွညျသူတှကေ သုံးမယျဆိုလဲ အလအေလှငျ့ မဖွဈအောငျ သခြောတပျစခေငျြတယျ။ maskကို မေးစခြေိ့တျလိုကျ တောငျခြိတျ မွောကျခြိတျနဲ့က သုံးရာမကဘြဲ ဖွုနျးတီးရာ ကပြါတယျ။ ကိုယျလိုသလောကျပဲ သုံးဖို့ဝယျထားပွီး ကနျြတာ ကနျြးမာရေးဌာနကို ဝယျပွီးလှူထားသငျ့တယျ။ ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးတှမှော လုံလုံလောကျလောကျ ရှိနမှေ သူတို့အတှကျ စိတျခရြတာမို့ ပွညျသူတှေ အတှကျ ဆေးသခြောကုပေးလို့ရမှာဆိုတာ မမစေ့ခေငျြပါဘူး။
မွနျမာနိုငျငံအတှကျဆို ဒီလို mask လုပှဲတှမှော မပါရအောငျ အကောငျးဆုံးနညျးကတော့ ပွညျသူတှေ အတတျနိုငျဆုံး အိမျထဲမှာ နတောပါပဲ။ အိမျထဲမှာ နရေငျ mask သကျသာမယျ၊ virus အကူးခံရဖို့ နညျးတယျ၊ တိုငျးပွညျကိုလဲ ကူညီရာ ကပြါတယျ။ MOHS က ပွောတဲ့ လမျးညှနျခကျြတှေ နားထောငျပွီး virus ရနျ ကာကှယျဖို့ အိမျထဲမှာ နကွေပါစို့။
US နဲ့ နိုငျငံအလိုကျ mask ပွဿနာ ဖွဈထားတဲ့ link တှေ reference အနနေဲ့ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
တရုတ်ပြည်အတွင်း ရောဂါလက္ခဏာ ပြသခြင်း မရှိသူများထံမှ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ဆက်လက်ပျံ့နှံ့ကာ ပြည်လည်ကူးစက်မှုများ ရှိနေ၊ ကူးစက်မှုနှုန်း ပြန်လည်မြင့်တက်လာ
တရုတ်နိုင်ငံ ၊ ဝူဟန်မြို့ မှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု လူနာ မရှိတော့တဲ့ ပထမဆုံးမြို့ အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်…